Vahaolana namboarina manokana namboarina CABINT nataon'i Die Casting & Cnc Machining - Minghe Casting
LED DISPLAY CABINT Solutions By Casting & Cnc Machining
IATF 16949 CERTIFIED CAST MANUFACTURING SY CNC MACHINING HO AN'NY LED DISPLAY CABINT
Ny fampisehoana LED dia fampisehoana tontonana fisaka, misy takelaka maoderina kely LED, ampiasaina hanehoana lahatsoratra, sary, horonan-tsary ary fitaovana fampahalalana hafa. Ny efijery fampisehoana elektronika LED dia mampifandray ny teknolojia microelectronic, ny teknolojia solosaina ary ny fanodinana angovo. Izy io dia manana tombony amin'ny loko mamirapiratra, sakany mavitrika, famirapiratana avo, fiainana lava, asa mitombina sy azo antoka. Ny fampisehoana LED dia be mpampiasa amin'ny haino aman-jery ara-barotra, tsena fampisehoana kolontsaina, kianja filalaovana, fanaparitahana vaovao, fampahalalam-baovao, varotra fiarovana, sns., Hanomezana fahafaham-po ny filan'ny tontolo samihafa.
Ny akorany amin'ny takelaka fampiratiana LED dia vokarin'ny fomba fanariana maty.
Minghe dia manome ny vahaolana habe namboarina ho an'ny fangatahana isan-karazany. Afaka manolotra volavolan-tsary ho an'ny hevitrao henjana izahay ary hanao vahaolana optimized ho anao miaraka amin'ny vidiny mirary.
Ho an'ny eritreritrao famoronana dia manana fahaiza-mivoatra matanjaka izahay hanao takelaka fanariana maty tsy manam-paharoa ho anao. Izahay dia miantoka ny OEM, ODM fiaraha-miasa feno amin'ny drafitra mialoha sy planina haingana indrindra, kalitao avo, vidiny tsara ary fandefasana haingana.
Ho an'ny fametrahana manokana anao dia omenay anao ihany koa ny fonosana tsara indrindra ho famonoana vahaolana mahazatra hanamorana ny fametrahana. Raha dinihina ny vidiny, dia afaka manolotra ny vahaolana voavoatra indrindra ho an'ny mpanjifa rehetra izahay.
Mifandraisa aminay ny injenieran'ny LED DISPLAY CABINT anio hiresaka momba ny mombamomba ireo tetikasanao sarotra.
1. Fampiharana famoahana jiro mahazatra matetika.
Ny traikefan'i MINGHE dia tsy manam-paharoa amin'ny famolavolana, ny fampandrosoana ary ny fanamboarana vahaolana maty ho azy ary ny fametahana machining cnc ho an'ny karazana fampiharana LED DISPLAY CABINT, ao anatin'izany fa tsy ferana amin'ny:
CABINT nomerika LED
CABINT DISPLAY ao anaty trano
CABINT DISPLAY ivelany
CABINT DISPLAY LED miharo volo
CABINT DISPLAY LED tsy mifangaro
2.Nahoana no mifidy anay amin'ny tetik'asa fampisehoana CABINT anao
Minghe dia manana traikefa 30 taona mahery manampy ny mpanamboatra cabint fampisehoana famolavolana singa mekanika mahomby. Rehefa miara-miasa amin'i Minghe ianao dia afaka mahazo ireto tombony manaraka ireto amin'ny fizotrantsika fanariana faty:
Minghe dia ISO Certified Die Casting Manufacturer ary manana traikefa betsaka amin'ny famolavolana sy ny famokarana zinc sy ny aliminioma mba hanehoana ny fari-pahaizana momba ny kalitaon'ny cabint.
Miaraka amin'ny milina fanontam-pirinty manomboka amin'ny lehibe ka hatramin'ny kely, dia manana ny fahaizany manamboatra ampahany milentika amin'ny hafanana amin'ny habe rehetra isika, manomboka amin'ny efijery Indoor ka hatramin'ny encolsure amin'ny efijery ivelany ho an'ny fampiratiana tarihina.
3. Serivisy fanamboarana hafa ho an'ny CABINT fampisehoana manokana
Ho fanampin'izany, Minghe koa dia manome ny masinina CNC, ny fandefasana vola, ny fanariana fasika ary ny serivisy hafa mifandraika amin'ny DISPLAY CABINT namboarina.
Cnc milina DISPLAY CABINT
CABINT fampisehoana fampiasam-bola
CABINT DISPLAY fanariana fasika
4. Ireo fahafaha-manamboatra ny famaritana mazava tsara momba ny CABINT DISPLAY
Fitaovana fanariana maty ho an'ny CABINT DISPLAY:
Fahaiza-mamita amin'ny alàlan'ny famolavolana CABINT:
Fomba famokarana CABINT isan-karazany:
FAMPISEHOAN'NY CABINT Machining CNC ary fampiharana fanariana maty:
LED Digital DISPLAY CABINT; LED Dot Matrix Graphic DISPLAY CABINT;
Ny fanadihadiana momba ny tranga Minghe an'ny Casting Cabint Casting
Safidio ny serivisy fanoratana cabint tsara indrindra
Amin'izao fotoana izao, ny ampahany amin'ny fampisehoana Led Display Cabint dia aondrana any Amerika, Canada, Australia, United Kingdom, Alemana, France, Sout Africa, ary firenena maro hafa manerantany. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Custom serivisy maty casting china manome filaharana mateza sy mora vidy mifanaraka amin'ny famaritana anao amin'ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny olonay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetik'asa fanariana Led Display Cabint anao.